काठमाडौँ:- आजकलका युवाहरुमा मोबाइलको लत कति सम्म छ भन्ने कुरा भारतको दक्षिणी प्रदेश तेलंगानामा घटेको अनौठो घटनाबाट नै सहर्ष थाहा पाउन सकिन्छ। तेलंगानाको साइबराबादमा एक व्यक्तिले आफ्नो छोराको हात नै काटिदिएको छ। पीडित छोराको आमाको बयानको आधारमा आरोपी पितालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आमाको अनुसार छोराको मोबाइलमा लत लागेको थियो र ऊ अश्लील फिल्महरु हेर्ने गर्थ्यो , जस कारण पिता रिसले आगो भएका थिए।
यो घटनाको साइबराबादको पहाडी इलाकाको हो। पीडित युवकलाई अस्पतालमा भर्ना गरिसकेको छ। प्रहरीले बताए अनुसार ४३ वर्षीय मोहम्मद क्युम कुरैशीलाई हिंसाको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ।
जानकारी मुताबिक , क्युम कुरैशी पेसाले इलेक्ट्रिसियन हुन् र आफ्नो छोरा मोबाइलको लतमा लागेकोमा रिसले चुर भएर बसेका थिए। खालिदको आमाले बताए कि उसले केही समय पहिले मात्र नयाँ स्मार्टफोन खरिद गरेको थियो र रातभरि मोबाइलमा अश्लील फिल्महरु हेर्ने गर्थ्यो।
खालिदको पिता अक्सर ऊ प्रति आक्रोसित हुन्थे र रातभरि मोबाइलमा नचलाउन निर्देशन दिन्थे। र यसै विषयलाई लिएर घरमा बारम्बार झगडा हुने गर्थ्यो। पिताको अनुसार कि खालिद बिहान हुने बेला सम्म मोबाइलमा अश्लील भिडियोहरु हेरेर बस्ने गर्थ्यो।
दुई दिनअघि पिता-पुत्र बीचमा मोबाइलको यसै लतको विषयलाई लिएर झगडा भएको थियो। तर यस पटक झगडाले उग्र रुप लियो र खालिदले आफ्नो पिताको हातमा मुखले टोकेर घरबाट भाग्यो। त्यसपछि ऊ घरमा बेलुका अबेर फर्क्यो।
खालिद अबेर रात घरमा फर्कदा घरमा माता-पिता सहित तीन भाइबहिनीहरू पनि थिए। त्यस दिन आरोपी पिताले केही गरेनन्। तर सोमबार जब घरमा कोही पनि थिएनन, तब खालिदको पिता उसको कोठामा गए। खालिद आफ्नो कोठामा सुतिरहेको थियो। आरोपी पिताले खालिदको हात अचानोमा राखी छुरीले एकै झट्कामा काटे। पहाडी इलाकाको इन्स्पेक्टर लक्ष्मीकान्त रेड्डीले भने कि पीडित आमाको बयानको आधारमा आरोपी पितालाई हिरासतमा लिईएको छ।
प्रहरीको अनुसार खालिदको हातमा गम्भीर घाउँ भएको छ र उपचारको लागि धेरै अस्पतालहर्रु बदल्न परेको थियो। खालिद अहिले अस्पतालमा छ र अहिले पनि उसको उपचार चलिरहेको छ। एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन २२, २०७४१९:४४
वनको आगो गाउँमा पस्दा छ घर जलेर नष्ट
दुर्घटनामा परि १७ वर्षीय सन्दीपको मृत्यु
हाइड्रोपावरले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी !
घाँस काट्न जानका लागि नदी तर्ने क्रममा बगेर सकुन्तलाको मृत्यु !
आन्दोलनका कारण भक्तपुरमा खानेपानीको हाहाकार !
३९ सेकेन्ड अगाडि पत्रपत्रिका